Nin Cuntooyinka Fudud Ku Iibiya Waddooyinka Newyork Oo Jaamacado Ka Jeediyay Muxaadarooyin Oo Codsi & Ballan Qaad Ay U Fidiyeen Jaamicado Kale ! - Wargane News
Home Somali News Nin Cuntooyinka Fudud Ku Iibiya Waddooyinka Newyork Oo Jaamacado Ka Jeediyay Muxaadarooyin...
Dedaalku waa arrin aad u muhiim ah sidoo kalena waxa hubaal ah in qofka si dhab ah u dedaala uu hadafkiisa gaadhayo.
Xaatim Al-jasmi waxa uu u dhashay Dalka Masar waxay da’diisu tahay 48 jir waxa uu leeyahay huteel uu ku sameeyo cuntooyinka fudud waxa aanu ku yaallaa huteelkaasi mid ka mid ah waddooyinka waaweyn ee Magaalada New York.
Xaatim ayaa waxa uu qaadaa dhigay siyaasada aqalka cad ee Maraykanka iyo sidoo kale siyaasada Madaxwayne Donald Trump iyo xiisada ka dhex aloosan Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka iyo waliba khilaafka ka dhex taagan waddamada gacanka Carbeed.
Intaasi kadibna Xaatim waxa uu soo shaac baxay kadib markii ay jarriidada NewYork Times la yeelatay wareysi gaar ah maalintii sabtidii ee toddobaadkan, halka telefiishino badan oo ka hawl gala dalkaasi ay ku soo marti qaadeen barnaamijyo gaar ah oo danaynaya qaabka uu arrimaha kala duwan ee siyaasada u faalaynayo, Xaatim ayaa waxa lagu marti qaaday Jaamacadda Colombia waxa aanu halkaasi ka soo jeediyay khudbad (lecture) aad u qiima badan oo ay dadkii soo xaadiray la dhaceen.
Dhinaca kale, Jaamacado kale ayaa ka codsadey inuu booqdo isla markaana waxay u ballan qaadeen inuu ka mid noqon doono macalimiintooda.